Umkhiqizi we-China Quality Wall Plate, Factory - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Plastic Ukubumba > Ipuleti lodonga
Amapuleti e-CTC Connexions Wall ayisinqumo sakho esihle sokuhlobisa indlu yakho ngazo zonke izinhlobo zamachweba afana ne-HDMI, Ethernet, TV BNC, njll.
I-COAX HDMI Cable Wall Plate
Le COAX HDMI Cable Wall Plate ikunika ukufakwa okusheshayo nokulula futhi kufanelana nayo yonke ipuleti lesokhethi elijwayelekile. Ifaka i-HDMI esheshayo ne-4K High Resolution Support. ICoax Cable F iyahambisana ne-satellite wiring, cable cable ne-internet kanye ne-antenna system. Iqeda ngokuphelele ukuhlangana kwekhebula ngokufihla izintambo zakho odongeni; yenza ucingo endlini yakho ngokuhlanzekile nangendlela efanelekile ukuze ulalele / ividiyo ngale COAX + HDMI Cable Plate.
2 Gang Ikhebula Plate
I-Connexions ingumkhiqizi oholayo wePlastiki Ikhebula Plate enolwazi olunzulu eminyakeni engaphezu kwengu-17. Le 2 Gang Cable Plate yenzelwe ukuphathwa kwekhebula kwangaphakathi kwe-HDMI, i-coax, idatha, izwi nokunye ukufakwa kwamandla kagesi okuphansi. Ama-Cable Plates ethu athunyelwa e-US nase-Europe ngamasheya amakhulu emakethe. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Yonke imikhiqizo yenziwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 futhi i-100% ihlolwe ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
I-1-Gang Recessed Cable Plate
Con ‚· Ama-Connexions angumkhiqizi ohamba phambili wePlastiki Ehlehlisiwe Yekhebula Elinolwazi olunzulu eminyakeni engaphezu kwengu-17. Le 1-Gang Recessed Low Voltage Cable Plate yenzelwe ukufihla amakhebuli we-low-voltage audio noma wevidiyo ngaphakathi kodonga lwakho. Amapuleti ethu ekhebuli ahlehlisiwe athunyelwa e-US nase-Europe ngamasheya amakhulu emakethe. Besilokhu sizinikela ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nokuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kakhulu. Yonke imikhiqizo yenziwa ngaphansi kohlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO9001 futhi i-100% ihlolwe ngaphambi kokuthunyelwa. Ama-connexions azoba ngumenzi wakho obambisene naye wesikhathi eside eChina.
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ipuleti lodonga abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ipuleti lodonga esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.